Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ubhadane luguqule kanjani emfundweni yokungenisa izihambi?
Lolu bhubhane luthinte imboni ngayinye kanti imboni yezivakashi ibe ngeyokushesha kakhulu ukuphendula kuzinguquko ezenzeka emhlabeni jikelele. Isimo semvelo somkhakha sokuqina kanye nokuzivumelanisa nezimo sizibonakalisile esimweni esiwubhadane. Imikhiqizo ehamba phambili yokungenisa izihambi nayo iyavela ezindaweni ezinjengokusebenza, okuholela ezinhlakeni ezinamathelayo, ezingabizi kakhulu. Kunokuhlanganiswa okuningi kwezobuchwepheshe kule mikhiqizo futhi kuya ngokuya kuba nokuqanjwa okusha.
UDkt Suborno Bose, uSihlalo kanye noMphathi Omkhulu we-IIHM, kudala wakhuluma ngezindlela abafundi abangaphuma kuzo ezikhungweni zokuqeqesha izihambi. Namuhla, lolu bhubhane selukhuphule amathuba okuba iziqu zokungenisa izihambi futhi i-IIHM ihola phambili ekuqeqesheni abafundi nokubalungiselela le mboni. UDkt Bose ukholelwa ukuthi umhlaba osanda kubhebhetheka uzodala amathuba kulabo abafuna ukungena embonini futhi uzofuna ukuqondwa kabanzi kwezindawo eziya ngokuya zibaluleka kulezi zinsuku njengokuthuthuka kwezobuchwepheshe emkhakheni wezivakashi.
Izwe elisanda kubhebhetheka lizokwakha izindlela ezintsha nezingalindelekile zabafundi bokungenisa izihambi. Imboni izofuna ukuqonda okukhulu kwezindawo ezinjengezixazululo zobuchwepheshe, amamodeli wezinsizakalo ezithinta kancane, ukulawulwa kwezinhlekelele, ukuhlela okusebenzayo kokusebenza kanye nokwenza isipele ngezimo. Ngezidingo ezinjalo, isidingo samakhono ochwepheshe bokungenisa izihambi sizokwanda kuphela. Ngakho-ke, ezemfundo nazo zizoqinisa abafundi ngamakhono azobenza basebenze kahle futhi balungele ikusasa, Ukungenisa izihambi njengomsebenzi kuzoqhubeka nokuba namandla, ukufuna futhi kujabulise.
Imfundo yokungenisa izihambi ifaka phakathi ukuqeqeshwa okuningi okusebenzayo kanye nokuchayeka kanti i-IIHM ihlinzeka ngazo zombili lezi zinto ukuqinisekisa ukuthuthuka okuphelele kwabafundi. Ngenkathi i-IIHM ibaqeqeshela ukungena emakethe yezemisebenzi ezimbonini ezahlukahlukene, ibuye ibakhuthaze ukuthi baqale amabhizinisi abo kunoma iyiphi indawo ebathandayo. Futhi ineseli elikhethekile lokuthuthukisa osomabhizinisi elibizwa ngeSAHAS. Lokhu empeleni kuyisikhwama se-corpus lapho abafundi abakhuthazeke ngempela ukuqala amabhizinisi abo bangabelwa khona imali yokuzibandakanya. Kufanele bahambise imodeli yebhizinisi esebenzayo futhi efinyelelekayo ukuze bakwazi ukuthola izinsiza zeSAHAS.
Isimo esiwubhadane sishiye intsha eningi izibuza ukuthi izokwenzenjani emisebenzini yayo. Kodwa-ke, abafundi abaningi be-IIHM baqala imisebenzi yabo ngesikhathi sokuvalwa komqedazwe weCovid-19 futhi basaqhuba ngempumelelo amabhizinisi abo. I-IIHM ihlinzeka ngemvelo evumayo nohlelo lokusekela lapho abafundi bezizwa bekhuthazekile futhi bezethemba ukuguqula amaphupho nemibono yabo ibe ngokoqobo.
I-IIHM idale isikhwama se-corpus ngokusebenzisa uhlelo olubizwa ngeSAHAS. Umqondo ukukhuthaza abafundi ukuthi baqale amabhizinisi abo futhi i-IIHM izosekela umbono wabo ngeSAHAS. Lesi sinyathelo sakhuthaza abafundi abaningi ukuthi basungule izinto ngesikhathi sokuvalwa bese beziqalela ukuqala kwabo.
Amakhono afiseleka kakhulu emakethe yanamuhla amakhono athambile. Iningi lezincwadi zokucwaninga kanye nabacabangi babikezele ukuthi umhlaba ngemuva kobhubhane nakanjani uzogxila kakhulu kumakhono athambile. Lokhu kusho ukuthuthukiswa kwamakhono abantu okubaluleke kakhulu embonini yezokungenisa izihambi.
I-IIHM isiza abafundi ukuthi baqonde futhi baqonde amandla wamakhono athambile. Njengoba laba bafundi beveza izindlela zabo zomsebenzi, la makhono athambile azoba yisici esikhulu sokunquma ikusasa labo futhi abenze bakwazi ukubhekana nezimo futhi bakwazi ukuzivumelanisa nezimo, bathuthukise ikhono lokushintsha izingqondo, balwe nokungaqiniseki futhi basungule ukwethenjwa. Lezi zimfanelo zizobasiza bobabili esikhathini esifushane nangesikhathi eside njengoba behlola amathuba nezindlela ezintsha emhlabeni wobhadane.
Kuwo wonke lo bhubhane, i-IIHM izamile ukugqugquzela abafundi, ubuhlakani kanye nabasebenzi. Ukugcina ukuxhumana okusondelene njalo nabafundi ukuze baqonde izidingo zabo nezinselelo kubasiza ukubagcina bexhunywe kwimisebenzi yezemfundo neyekhampasi ngokusebenzisa i-inthanethi. Ngonyaka owedlule, i-inter-college fest eyayihlelwe yi-IIHM, iRigolo, yabanjelwa enkundleni yezokuxhumana lapho abafundi babekhuthazwa khona ukuba babambe iqhaza futhi babonise ithalente labo.
Ngenkathi igagasi lokuqala lishaya ngo-2020 futhi isizwe sonke sangena ekuvalweni, i-IIHM yayingenye yezikhungo zokuqala ezanquma ukuqhubeka nenqubo yezemfundo ngokusebenzisa i-inthanethi. Njengoba ubuchwepheshe bethu besibusebenzise, ​​besingaqala ngaso leso sikhathi amakilasi. Kodwa-ke uDkt Bose uveze ukuthi i-IIHM inesizinda samakilasi abonakalayo njengoba abapheki abaningi bamazwe omhlaba kanye nochwepheshe bokungenisa izihambi babevame ukwenza amakilasi e-inthanethi esikhathini esedlule. Ngakho-ke leli bekungelinye ithuba lokuhlola imikhuba yokufunda emisha.
Umbono ophusile ovamile wokuthi ukungenisa izihambi uhlobene kuphela namahhotela uyacaciswa futhi yingakho i-IIHM iqhubekisela phambili imfundo yayo. Kunezwe lamathuba alinde abafundi bokungenisa izihambi futhi i-IIHM ihlale ikhuthaza abafundi ukuthi bahlole namathuba amaningi ebhizinisi namabhizinisi. Abafundi bokungenisa izihambi bayadingeka ezimbonini ezahlukahlukene ezinjengezokuvakasha, ukuphathwa kwemicimbi, amabhange, ukunakekelwa kwezempilo, izakhiwo ezisezingeni eliphakeme, ukuthengisa okunethezeka, ezokundiza, ezokuvakasha kanye nezinye eziningi. Le misebenzi ifaka ukwehluka kwemisebenzi futhi ivumela ukuqamba nokuxhumana komuntu siqu. Abafundi beziphuzo, nabo, bafundiswa ubuhlakani bezamabhizinisi nobamabhizinisi obubahlomisa ngezisekelo ezenza ukuthi zilungele ukuqhutshwa esikhathini esizayo.
Umbono we-IIHM ukuthatha imfundo yokungenisa izihambi ezingeni elihluke ngokuphelele elizolungiselela abafundi banamuhla izimboni namabhizinisi akusasa. Kuhola ushintsho futhi kulungiselela abafundi bayo isimo esijwayelekile esishintshe umhlaba unomphela eminyakeni emibili edlule. Ukuhlola amathuba emfundo yokungenisa izihambi yingakho uhlelo lokuhlanganyela lwe-FIIHM olubandakanya bonke osomabhizinisi bemboni kanye nochwepheshe abazokweluleka futhi babelane ngolwazi lwabo lomkhakha nabafundi lwaqalwa. Kuhlelwa nesikhungo socwaningo kwezokuvakasha okuyisidingo sehora ukuze imfundo yezokungenisa izihambi ihlangane ngaphandle kwezihibe nezifundo zezokuvakasha.
U-DR Suborno Bose isikhulu esiphezulu se-IIHM Hotel School uhola lesi sikhungo kusuka phambili ehlose futhi aguqule imfundo ibe yinto ejwayelekile futhi okuyisidingo sehora.